Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana India » Niatrika fanakatonana i New Delhi noho ny setroka misy poizina mahafaty
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Vaovao Mafana India • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Safety • News sustainability • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Niatrika fanakatonana i New Delhi noho ny setroka misy poizina mahery vaika.
Niharatsy ny kalitaon'ny rivotra tao New Delhi tamin'ny herinandro lasa teo noho ny anton-javatra maro, anisan'izany ny fandoroana mololo sy ny entona avy amin'ny fitaterana sy ny afomanga fetin'ny Diwali.
Niaiky ny tompon’andraikitra iray tao amin’ny fitsarana fa “toy ny mifoka sigara 20 isan’andro” ny mifoka rivotra eto an-drenivohitra.
Ny birao fandotoana federaly ao India dia nanome baiko ny fanjakana sy ny manampahefana eo an-toerana ny zoma mba hiomana amin'ny fepetra maika.
Tsy maintsy mandray “fanapahan-kevitra maika” ny tompon'andraikitra foibe sy ny fanjakana ary manolotra drafitra hiadiana amin'ny setroka amin'ny alatsinainy.
India fitsarana Faratampony nanome baiko ny tompon'andraiki-panjakana mba handray "fanapahan-kevitra maika" ary hanolotra drafitra amin'ny alatsinainy, momba ny fomba hiadiana amin'ny setroka misy poizina izay mandrakotra ny renivohitra. New Delhi nandritra ny herinandro mahery izao.
“Fantatrao ve ny maharatsy ny toe-draharaha? Tsy maintsy manao saron-tava ny olona na dia ao an-trano aza, ”hoy ny Lehiben'ny Fitsarana NV Ramana, nanondraka ireo manampahefana ao amin'ny governemanta.
Nanaiky ny tompon'andraikitra iray fitsarana izay mifoka rivotra ao anatiny New Delhi dia “toy ny mifoka sigara 20 isan’andro”.
The fitsarana nitaky ny hampiharana fepetra maika, anisan’izany ny fanakatonana fohy eto an-drenivohitra.
Ny biraon'ny fandotoana federaly ao amin'ny firenena dia nanome baiko ny fanjakana sy ny manampahefana eo an-toerana ny zoma mba hiomana amin'ny fepetra maika.
Ny kalitaon'ny rivotra amin'ny New Delhi Niharatsy ny herinandro lasa teo noho ny antony maro, anisan'izany ny fandoroana vodi-kazo sy ny entona avy amin'ny fitaterana. Nanamarika ny fampahalalam-baovao Indiana fa nitranga ihany koa ny fihenan'ny fetiben'ny Diwali, rehefa maro ny olona nandika ny fandrarana ny afomanga.